Godina Harargee Bahaatti Keessatti Ummanni Waraana Liyuu Poolisii Somaalee Wayyaanee Dura Dhaabbachuu Jabeesse. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Guraandhala 24/2017 Harargee Bahaa Canqasaattii guyyuma Warraaqsii dhohee naannoodhuma sana bakka Baaduu jedhamuun beekamuutti humni Ittisa uummataa waraanaa maqaa LiyuuPoolisii Somaalee jedhamuun uummata keenya fixaa jiruu irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen liyuu poolisii irra lama du’aan adabee jira. Naannoo kanatti guyyaa har’aa jechuun Guraandhala 26/2017 mootummaan wayyaanee waraanaa koomaandii Poostii heddumminaan bobbaasuun qaama waraanaa Liyuuhayilii kana ajjeesee baasaa jechuun uummata hiraarsaa jiriti.Akkasumaas Waraannii komaandii poostii hedduminaan Magaalaa Cinqasaa irra qubsiifamuu maddeen Qeerroo Gabaasan.
Wayyaaneen Sagalee uummataa Ukkamsuuf of ijibbachaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Gabaasaa baldhaan walitti deebina.
ODDU/NEWS, OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM, Uncategorized